मीठो विजय भिडियो — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
बोल्ट • जुलाई 28, 2015 मा 1:41 बजे • जवाफ
SWEET विजय!!!!!!!!!!!! यो जाम प्रेम.
Natangwe • डिसेम्बर 18, 2015 मा 7:58 बजे • जवाफ
तपाईं Fam नामिबिया माया '।.
आफ्नो अनुग्रह आफ्नो जीवन मानिसको सबै दिन तपाईं संग हुन सक्छ.
MAKAY देखि • जुलाई 28, 2015 मा 1:53 बजे • जवाफ
मलाई यो गीत मनपर्छ. उर यस्तो प्रेरणा
Tirzah • जुलाई 28, 2015 मा 1:55 बजे • जवाफ
तपाईं हाम्रो सर्वशक्तिमान राजा आदर गर्ने अर्को एल्बम बाहिर राख्दै लागि यात्रा धन्यवाद. मीठो विजय मेरो मनमा नजिक र प्रिय छ. प्लेनो मा कन्सर्ट मा, TX, यो गीत को कन्सर्ट अवधिमा उपासना गीत र के ठूलो उपासनाको समय थियो जस्तै लाग्यो. प्रशंसा र उहाँलाई आदर राख्न!!
Valerie • जुलाई 28, 2015 मा 2:27 बजे • जवाफ
DerrickMichaelWilliams • जुलाई 28, 2015 मा 2:50 बजे • जवाफ
तपाईं आफ्नो इमानदारिता लागि ली यात्रा धन्यवाद. यो एल्बम मेरो जीवनमा सबैभन्दा कठिन समयमा मलाई प्रोत्साहन. यो एल्बम मा मेरो मनपर्ने गीतहरू मध्ये एक छ. #SweetVictory
“राजा गर्न टोस्ट, छत गर्न चियर्स, राम्रो महसुस हामी Gon 'को समाप्त गर्न यो बनाउन
मलाई सुन्न, holla तिमी मलाई महसुस भने, हामी limping हुनत हामी अझै पनि पनि चलिरहेको
Carlton • जुलाई 28, 2015 मा 6:12 बजे • जवाफ
त्यसैले कार प्रतिनिधित्व गर्छ “क्रिश्चियन जीवन” वा प्रतिनिधित्व गर्छ “येशूले”? वा प्रतिनिधित्व गर्छ दुवै? या त बाटो, भिडियो आँसु मलाई ल्याए.
Carlton • जुलाई 28, 2015 मा 6:13 बजे • जवाफ
Keinya • सेप्टेम्बर 7, 2015 मा 10:28 छु • जवाफ
यो भिडियो प्रेम. धेरै स्तर मा प्रतीकात्मक! तिमी के लागि धन्यवाद…तपाईं गहिरो महसुस गरिएको छ मार्फत परमेश्वरले गर्छ के.
ManuelAdams • सेप्टेम्बर 16, 2015 मा 11:57 छु • जवाफ
सुसमाचार सन्देश र सतावट र परीक्षा मार्फत विजय को केन्द्रीय विषय त आज आवश्यक छ. मेरो प्रार्थनाको धेरै मानिसहरू यो गीत र भिडियो मा चित्रण आवश्यक भाडादार गले छ. आफ्नो उपहार मार्फत एक प्रभाव बनाउन परमेश्वरले तपाईंलाई प्रेरित गर्न जारी हुन सक्छ.
निक • सेप्टेम्बर 18, 2015 मा 7:14 बजे • जवाफ
यात्रा, तपाईं तरिकामा धेरै मलाई प्रभावित छु. सबै मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचन फैलँदै लागि धन्यवाद. म आफ्नो काम र के भन्नुहुन्छ छ प्रेम. परमेश्वरको आशिष!
Leslie सकारात्मक प्रतिक्रिया • नोभेम्बर 6, 2015 मा 9:36 छु • जवाफ
यात्रा सेवामा राख्न!….आफ्नो संगीत मेरो जीवन मेरो सबैभन्दाअध्यारो क्षणमा मार्फत मदत छ. प्राण खोज्ने. #उठेर
सानो जेरी • जनवरी 10, 2016 मा 12:06 बजे • जवाफ
त्यो भयानक यात्रा हो,असल प्रभु तपाईंलाई उहाँको सन्देश बढाउन सक्छ….परमेश्वरले आफ्नो शक्ति #RandomBars छ
Joanne • फेब्रुअरी 12, 2016 मा 4:21 बजे • जवाफ
मीठो विजय!!! जाडो जाम 2016 नोक्सभिल्ले, तमिलनाडु. तपाईं संग उपासना गर्न प्रतीक्षा गर्न सक्दैन!
BrendaHohensee • फेब्रुअरी 15, 2016 मा 11:46 छु • जवाफ
यसलाई मैले गत वर्ष गए पनि संघर्ष विचार गरे किनभने म यो भिडियो हेर्दै कराए र कसरी यो बढ्दै तर अप दिने छैन र अन्त येशूको राखिएको’ अनुग्रह मलाई सुरक्षित!!!
Jesudunsin स्टीफन • अप्रिल 19, 2016 मा 2:10 बजे • जवाफ
वाह,मेरो उत्कृष्ट गीत
Kianna • सक्छ 20, 2016 मा 4:12 बजे • जवाफ
यो भिडियो अवधारणा धेरै relatable छ. म हेर्दै यो आनन्द.
पैट्रिक • सक्छ 23, 2016 मा 11:48 बजे • जवाफ
म बेइमान धेरै soooo यो धुन प्रेम! रिप्ले हिट गणना गर्न सक्दैन.
जन Westra • जुलाई 1, 2016 मा 2:43 बजे • जवाफ
यो एउटा अचम्मको गीत हो, मलाई गलत प्राप्त छैन, तर तपाईं साँच्चै शब्द प्रयोग गर्न गर्नुभयो “को **” यो वर्णन गर्न?
KIANNA • जुन 26, 2016 मा 1:28 बजे • जवाफ
मानिस, म यो गीत गर्न गीत समीक्षा गर्न समय लिए. बस म गीत पछि सन्देश प्रेम भन्न मलाई गरौं. परम विजय ख्रीष्ट मर्नुभयो कि मृत्यु छ. हो, मृत्यु तर सबै शक्ति गुलाब. यात्रा ली, भगवानले तिम्रो रक्षा गरुन!!!!!!!!!!!!!
JordanLivada • नोभेम्बर 21, 2017 मा 9:58 बजे • जवाफ